म एउटा अविवाहित 25बर्षिय पुरुष हु । बिहे पनि गरेको छैन । मेरो लिङ्ग राम्रो सङ्ग उत्तेजित हुदैन र लम्बाइ पनि उत्तेजित हुँदा4inch जति मात्र हुन्छ । बिहे गर्ने कि नगर्ने यही समस्याले चिन्तित छु । के गर्नु उचित होला ? सन्तान उत्पादन मा केहि समस्या हुन्छ कि हुदैन ? यदि उपचार गराउन पर्ने हो भने कहाँ कस्तो र के उपचार गराउनु उचित होला ? | Hamro Doctor
म एउटा अविवाहित 25बर्षिय पुरुष हु । बिहे पनि गरेको छैन । मेरो लिङ्ग राम्रो सङ्ग उत्तेजित हुदैन र लम्बाइ पनि उत्तेजित हुँदा4inch जति मात्र हुन्छ । बिहे गर्ने कि नगर्ने यही समस्याले चिन्तित छु । के गर्नु उचित होला ? सन्तान उत्पादन मा केहि समस्या हुन्छ कि हुदैन ? यदि उपचार गराउन पर्ने हो भने कहाँ कस्तो र के उपचार गराउनु उचित होला ?
on Thu, Mar 14 2019 06:50 PM
प्रश्नको लागि धन्यवाद । समस्या भएको हो कि नाइ एकपटक परिक्षण गरेर मात्र भन्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा आफुलाइ त्यस्तो भएको झै पनि लाग्न सक्छ । यसको कारणहरु धेरै हुन्छन, जेनेटिक, साइकोलोजिकल आदि । एकपटक यौन रोग विशेषज्ञलाई भेटी विस्तृत परिक्षण गराएर त्यसै अनुसार गर्नुहोला । हाम्रोडक्टर मार्फत अनलाइन परामर्श लिन यो लिन्कमा जानुहोला: https://www.hamrodoctor.com/service/dermatology
on Tue, Mar 19 2019 07:25 AM
please provide me information about penile discharge ant it's... on Thu, Apr 04 2019 11:03 AM
malai Khana khai sakepachi chin chin ma pisab polne garcha... on Tue, Apr 02 2019 02:11 PM
mero pisab raatima poleko polay garcha toilet Jada ni thorai... on Tue, Apr 02 2019 01:33 PM
azoospermia on Sun, Mar 24 2019 12:14 AM
I have the urge of urination per hour in morning during classroom... on Wed, Feb 20 2019 06:11 PM